7 Ụmụ Izrel wee mee omume ekwesịghị ntụkwasị obi n’ihe banyere ihe a ga-ebibi ebibi, n’ihi na Ekan+ nwa Kamaị, nwa Zabdaị, nwa Zira, nke ebo Juda, weere ụfọdụ n’ime ihe a ga-ebibi ebibi.+ Jehova wee weso ụmụ Izrel iwe dị ọkụ.+
2 Jọshụa wee si na Jeriko zipụ ndị ikom ka ha gaa E-aị,+ bụ́ nke dị nso na Bet-evin,+ n’ebe ọwụwa anyanwụ Betel,+ ọ sịrị ha: “Gbagoonụ ledo ala ahụ.” Ndị ikom ahụ wee gbagoo ma ledo E-aị.+
3 E mesịa, ha lọghachikwutere Jọshụa wee sị ya: “Ka ndị agha niile ghara ịgbago. Ka ihe dị ka puku mmadụ abụọ ma ọ bụ puku mmadụ atọ gbagoo wee bibie E-aị. Emela ka mmadụ niile daa mbà site n’ịga ebe ahụ, n’ihi na ha dị mmadụ ole na ole.”
4 Ihe dị ka puku mmadụ atọ n’ime ndị agha ahụ wee gbagoo ebe ahụ, ma ha si n’ihu ndị E-aị+ gbaa ọsọ.
5 Ndị E-aị wee gbuo ihe dị ka mmadụ iri atọ na isii n’ime ha, ha wee si n’ihu ọnụ ụzọ ámá chụrụ+ ha ruo Shebarim ma na-egbu ha ná mkpọda ugwu obodo ahụ. N’ihi ya, obi malitere ịlọ ndị Izrel mmiri.+
6 Jọshụa wee dọwaa ákwà mgbokwasị ya ma gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala n’ihu+ igbe Jehova ruo ná mgbede, ya na ndị okenye Izrel, ha wee na-awụkwasị ájá n’isi ha.+
7 Jọshụa wee sị: “Ewoo, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, gịnị mere i ji kpọfeta ndị a Jọdan, naanị ka i nyefee anyị n’aka ndị Amọraịt ka ha bibie anyị? A sị nnọọ na anyị kpebiri wee biri n’ofe Jọdan!+
8 Biko, Jehova, gịnị ka m ga-ekwu mgbe Izrel siworo n’ihu ndị iro ya gbaa ọsọ?
9 Ndị Kenan na ndị niile bi n’ala ahụ ga-anụ ya, ha ga-agbakwa anyị gburugburu wee bipụ aha anyị n’ụwa;+ gịnịkwa ka ị ga-eme maka aha ukwu gị?”+
10 Jehova wee sị Jọshụa: “Bilie! Gịnị mere i ji daa kpuo ihu gị n’ala?
11 Izrel emehiewo, ha emebiwokwa ọgbụgba ndụ m+ nke m nyere ha n’iwu; ha ewerewokwa ụfọdụ n’ime ihe a ga-ebibi ebibi,+ ha ezuwo ohi+ ma kpuchie ya,+ tinyekwa ya n’arịa ha.+
12 Ụmụ Izrel agaghị enwe ike ibuso ndị iro ha agha.+ Ha ga-atụgharị si n’ihu ndị iro ha gbaa ọsọ, n’ihi na ha aghọwo ihe a ga-ebibi ebibi. Agaghị m anọnyere unu ọzọ ọ gwụla ma unu kpochapụrụ ihe a ga-ebibi ebibi nke dị n’etiti unu.+
13 Bilie! Doo ndị m nsọ,+ sịkwa ha, ‘Doonụ onwe unu nsọ echi, n’ihi na nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru: “Izrel,+ ihe a ga-ebibi ebibi dị n’etiti unu. Ị gaghị enwe ike ibuso ndị iro gị agha ruo mgbe unu wepụrụ ihe a ga-ebibi ebibi n’etiti unu.
14 Unu ga-apụtakwa n’ụtụtụ, n’ebo n’ebo, ọ ga-erukwa na ebo nke Jehova ga-ahọrọ+ ga-abịa nso, n’ezinụlọ n’ezinụlọ, ezinụlọ nke Jehova ga-ahọrọ ga-abịa nso, n’ụlọ n’ụlọ, ụlọ nke ọ bụla Jehova ga-ahọrọ ga-abịa nso, dimkpa ọ bụla n’otu n’otu.
15 Ọ ga-erukwa na a ga-agba onye ọ bụla a họọrọ nke ji ihe ahụ a ga-ebibi ebibi ọkụ,+ ya na ndị niile bụ́ nke ya, n’ihi na o mebiwo ọgbụgba ndụ+ Jehova nakwa n’ihi na o mewo ihe nzuzu na-eweta ihere n’Izrel.”’”+
16 Jọshụa wee bilie n’isi ụtụtụ ma mee ka Izrel bịa nso, n’ebo n’ebo, e wee họrọ ebo Juda.
17 O wee mee ka ezinụlọ niile nke Juda bịa nso, o wee họrọ ezinụlọ ụmụ Zira,+ e mesịa, o mere ka ezinụlọ ụmụ Zira bịa nso, dimkpa ọ bụla n’otu n’otu, e wee họrọ Zabdaị.
18 N’ikpeazụ, o mere ka ezinụlọ ya bịa nso, dimkpa ọ bụla n’otu n’otu, e wee họrọ+ Ekan nwa Kamaị, nwa Zabdaị, nwa Zira, nke ebo Juda.
19 Jọshụa wee sị Ekan: “Nwa m, biko, nye Jehova Chineke Izrel otuto+ ma kwupụtara ya mmehie gị,+ biko, kọọrọ m,+ Gịnị ka i mere? Ezochirila m ya.”+
20 Ekan wee zaa Jọshụa, sị: “N’ezie, mụ onwe m emehiewo Jehova bụ́ Chineke Izrel,+ lekwa lekwa ihe m mere.
21 Mgbe m hụrụ+ uwe pụrụ iche, nke mara mma, bụ́ nke si Shaịna,+ n’etiti ihe nkwata ahụ, hụkwa narị shekel ọlaọcha abụọ na otu mkpirisi ọlaedo, nke ịdị arọ ya dị iri shekel ise, ha gụrụ m agụụ,+ m wee chịrị ha;+ ma, lee! e zoro ha n’ime ala n’etiti ụlọikwuu m, ego ahụ dịkwa n’okpuru ya.”+
22 Ozugbo ahụ, Jọshụa zipụrụ ndị ozi, ha wee gbara ọsọ gaa n’ụlọikwuu ahụ, ma, lee! e zoro ya n’ụlọikwuu ya, ego ahụ dịkwa n’okpuru ya.
23 Ha wee si n’etiti ụlọikwuu ahụ chịpụta ha wee chịtara ha Jọshụa na ụmụ Izrel niile ma wụsa ha n’ihu Jehova.
24 Jọshụa na Izrel dum wee kpọrọ Ekan+ nwa Zira, chịrịkwa ọlaọcha ahụ na uwe ahụ pụrụ iche na mkpirisi ọlaedo ahụ,+ kpọrọkwa ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom, kpụrụkwa ehi ya na ịnyịnya ibu ya na ìgwè ewu na atụrụ ya, burukwa ụlọikwuu ya na ihe niile bụ́ nke ya, ha wee were ha bịarute na ndagwurugwu Ekọ.+
25 Jọshụa wee sị: “Gịnị mere i ji wetara anyị nsogbu?+ Jehova ga-ewetara gị nsogbu taa.” Izrel dum wee tụọ ya nkume,+ mesịakwa gbaa ha ọkụ.+ Ha wee tụọ ha nkume.
26 Ha wee tụkọta nkume dị ukwuu n’elu ya, ruo taa.+ Jehova wee kwụsị iwe ya dị ọkụ.+ Ọ bụ ya mere e ji akpọ ebe ahụ Ndagwurugwu Ekọ+ ruo taa.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D6%26Chapter%3D7%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl